Site na imepụta ihe eji arụ ọrụ na kaadi SD, isi ihe nwere ike ịnakọta ọtụtụ ọnụọgụ dị ka okpomọkụ, mmiri, nnu, PH na ihe yiri nke ala a nwalere na ezigbo oge, ma jiri otu igodo bulite data.
Portable osisi kanopi onye nyocha FK-G10
Ntinye ngwa ngwa:
Enwere ike iji ya mee ihe na mmepụta ihe ubi na nyocha sayensị. Iji nyochaa ihe ọkụkụ na-acha ọkụ ọkụ, tụọ nkwụsị nke ọkụ na osisi osisi, ma mụọ mmekọrịta dị n'etiti uto ihe ọkụkụ, mkpụrụ na ogo na itinye ọkụ, a na-eji ngwa iji tụọ ma dekọọ radieshon na-arụ ọrụ na foto (PAR) band nke 400nm-700nm. Ngalaba nke uru atụtụ bụ micromolar (μ molm2 / s) na square mita · s.
Ndụ osisi akwukwo ebe ihe atụ YMJ-G
Nwebata onye ọbịa:
Ọ bụ ngwaahịa mepụtara. Ọ bụ obere ngwaọrụ nke dị mfe iji wee rụọ ọrụ n'ọhịa. Ọ nwere ike ịlele ebe akwukwo na akụkụ ndị metụtara ya n'ụzọ ziri ezi, ngwa ngwa na enweghị mbibi. Ọ nwekwara ike ịlele mpaghara nke ahịhịa epuru na ihe ndị ọzọ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ ugbo, ihu igwe, oke ohia na ngalaba ndị ọzọ.
Ngwaọrụ ahụ nwere ike ịlele ogologo, obosara na mpaghara nke agụba ahụ, ma jikọta usoro ọnọdụ GPS, gbakwunye interface RS232, ma nwee ike ibubata data nha na itinye ozi n'ime kọmputa n'otu oge, nke dị mma maka ọtụtụ nke ndị nyocha ka hazie data ahụ.
Ndụ osisi akwukwo ebe mita YMJ-A
Okwu mmalite nye onye nwe ulo:
Ọ bụ obere ngwaọrụ nke dị mfe iji ma nwee ike ịrụ ọrụ n'ọhịa. Ọ nwere ike ịlele ebe akwukwo na akụkụ ndị metụtara ya nke epupụta n'ụzọ ziri ezi, ngwa ngwa na enweghị mmebi, ma tụọkwa ebe epupụta na akwụkwọ flakes ndị ọzọ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ ugbo, ihu igwe, oke ohia na ngalaba ndị ọzọ.
Ngwaọrụ nwere ike tụọ ogologo, obosara na mpaghara agụba ozugbo, ma jikọta usoro ọnọdụ GPS, ma gbakwunye interface RS232. Ọ nwere ike ibubata ihe mmesho data na itinye ozi n'ime kọmputa n'otu oge ahụ, nke dị mfe maka imirikiti ndị nyocha ka hazie data ahụ.
Portable akwukwo ebe detector YMJ-B
Ọ bụ obere ngwaọrụ nke dị mfe iji wee rụọ ọrụ n'ọhịa. Ọ nwere ike ịlele ebe akwukwo na akụkụ ndị metụtara ya n'ụzọ ziri ezi, ngwa ngwa na enweghị mbibi. Ọ nwekwara ike ịlele mpaghara nke ahịhịa epuru na ihe ndị ọzọ. A na-ejikarị ya arụ ọrụ ugbo, ihu igwe, oke ohia na ngalaba ndị ọzọ.
Ngwá Ọrụ Nzube:
Enwere ike iji akụrụngwa ahụ were tụọ ọdịnaya nke chlorophyll (unit SPAD) ma ọ bụ ogo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọdịnaya nitrogen, iru mmiri akwụkwọ, ahịhịa nke ahịhịa iji ghọta mkpụrụ osisi nitro chọrọ na enweghị nitro na ala ma ọ bụ ma oke nitrogen fatịlaịza etinyere. Tụkwasị na nke a, a pụrụ iji ngwá ọrụ a mee ka ọnụ ọgụgụ nke nitrogen fatịlaịza ma chebe gburugburu ebe obibi dịkwuo elu. Ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka sayensị na oke ohia na kọleji nwere ike iji ya wee mụọ ihe ọmụmụ banyere usoro ihe ọkụkụ yana maka usoro mmepụta ihe ubi.
FK-CSQ20 Ultrasonic jikọtara ihu igwe ọdụ
Enwere ike iji ya n'ọtụtụ mpaghara, dị ka nlekota ihu igwe, ọrụ ugbo na nlekota ihu igwe, nlekota gburugburu ebe obibi, gburugburu ebe obibi na gburugburu ebe obibi, na ọ nwere ike rụọ ọrụ na gburugburu ebe obibi (- 40 ℃ - 80 ℃). Ọ nwere ike nyochaa ọtụtụ ihe gbasara gburugburu ebe obibi ma hazie ihe ndị ọzọ dịka ihe ndị ọrụ chọrọ.
FK-Q600 Aka jidere ọgụgụ isi Agrometeorological gburugburu ebe obibi
Onye nyocha agrometeorological gburugburu ebe obibi bu ugbo ala microclimate nke emeputara nke oma maka mpaghara obere ala ubi na ala ahihia, nke na-enyocha ala, mmiri na mpaghara gburugburu ebe obibi ndị metụtara njikọ nke ahịhịa na ihe ọkụkụ. Ọ na-ahụkarị ihe 13 gbasara ihu igwe nke gburugburu ebe obibi metụtara metụtara ọrụ ugbo, dị ka ọnọdụ ala, mmiri ala, nkenke ala, pH ala, nnu ala, ikuku ikuku, ikuku ikuku, ike ọkụ, ikuku carbon dioxide, ụzarị ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma, ikuku ọsọ, ntuziaka ikuku, mmiri ozuzo, wdg, na-enye ezigbo nkwado maka nyocha sayensị, ọrụ ugbo, wdg.
Ugboro ugboro vibration field insecticidal lamp FK-S10
Frequency vibration ahụhụ na-egbu oriọna (njikwa ọkụ, njikwa mmiri ozuzo, njikwa oge) ụdị
Akpaka na-agbanye ọkụ na mgbede, ọkụ ga-agbanyụ na-akpaghị aka n'ehihie ma ọkụ ga-apụ na-akpaghị aka na ụbọchị mmiri ozuzo
All weather ihu igwe, mmiri ozuzo, àmụmà, elu okpomọkụ, corrosion
Nchekwa akpaaka na ụbọchị mmiri ozuzo ★ ụdịdị dị iche iche na-egbu ★ nnukwu ọnụọgụ ụmụ ahụhụ
A na-eji oriọna na-egbu ahụhụ na-ekpuchi anwụrụ ọkụ, na ihu igwe ọkụ anaghị emebi ahụ ọkụ.
Ọ bụrụ na agbanyere ike n'ụbọchị ahụ, oriọna na-egbu ahụhụ ga-agbanyụ na akpaghị aka mgbe sekọnd 5 gachara. Nke a bụ ihe dị njọ, ọkachasị n'ihi ìhè arụpụtara njikwa njikwa ọkụ
Ọgụgụ isi anyanwụ insecticidal oriọna FK-S20
Mkpụrụ ndụ cell solar
1. 40W modul cell anyanwụ
2. Iji igwe anwu n’eji anwu nke Suntech
3. Ọrụ mkpuchi ≥ 100 Ω
4. Nguzogide ifufe 60m / S
5. Akụkụ nrụnye bụ ogo 40
6. Ike mmepụta agaghị adị ihe na-erughị 90% n'ime afọ 12, ma ọ bụghị ihe na-erughị 80% na 13 ruo 25 afọ. Environmentdị arụ ọrụ gburugburu ebe obibi dị n'etiti - 40 ℃ na 85 ℃, ọ nwere ike iguzogide mmetụta nke akụ mmiri igwe na dayameta karịa 25 mm na ọsọ nke ≤ 23 mita kwa nke abụọ. Ule ikuku nnwale ≤ 2400pa